क्यान्सर ः कारण थाहा छ तर जोगिने चाहना छैन | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ मंसिर १६, मंगलवार ०२:०५ गते
क्यान्सर ज्यान लिने पिडादायी रोग हो, तर क्यान्सरबाट जोगिन कठिन छैन । क्यान्सर भएमा उपचार गरे निको हुन गाह्रो पनि छैन । तर, हामी क्यान्सरबाट जोगिने उपायहरुका बारेमा सरोकार नै राख्दैनौँ । अनि, रोग लागे पनि उपचारका लागि समय गुजारेर मात्रै अस्पताल जान्छौँ । यसले गर्दा निको हुने सम्भावना क्षीण भएर जान्छ । चिकित्सकहरु भन्छन्– चुरोट र खैनी खाने बानीले गर्दा धेरैलाई क्यान्सरले सताएको छ । तर, चुरोट–सुर्ती नखाई हामी बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित हुनेको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । फोक्सोको क्यान्सर हुने ९० प्रतिशत कारण चुरोट र खैनी खानु हो ।
नेपालमा क्यान्सर रोगको उपचार हुने मुख्य अस्पताल चितवन भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल हो । योसहित भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, काठमाडौँका त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि क्यान्सरको उपचार हुने गर्छ ।
यी सात अस्पतालहरुले सन् २००३ देखि सन् २०१२ सम्मको १० वर्षको अवधिमा क्यान्सर भएका २९ हजार ९०५ महिला र २६ हजार १०८ पुरूषको उपचार गरेका छन् । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालसँगको समन्वयमा यी अस्पतालमा आएका क्यान्सरका बिरामीहरुको समेत तथ्याङ्क राख्ने काम हुने गरेको छ । यी अस्पतालहरुमा उपचारका लागि आउनेहरुको तथ्याङ्क हेर्दा रोग लागेको अन्तिम समयमा मात्र उपचारका लागि आउने धेरै छन् ।
‘क्यान्सर भएर उपचारका लागि आउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै साढे १४ प्रतिशत पुरूषहरु ६० देखि ६४ वर्षका छन्’, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण विभागका प्रमुख किशोर प्रधानाङ्गले जानकारी दिए । त्यस्तै, महिलाहरुमा सबैभन्दा धेरै साढे १३ प्रतिशत बिरामीहरु ५० देखि ५४ वर्ष उमेरका छन् ।
‘महिला होस् या पुरूष, उमेर ढल्केपछि क्यान्सरले ग्रस्त बनाएको यो तथ्याङ्कबाट देखिन्छ’, प्रधानाङ्गले भने । पुरूषमा सबैभन्दा धेरै २० प्रतिशतलाई फोक्सोको क्यान्सर र महिलामा सबैभन्दा धेरै २१ प्रतिशतलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गरेको छ । ‘यी क्यान्सरहरु कम उमेरमा भन्दा उमेर ढल्कँदै गएपछि देखा पर्छन्’, प्रधानाङ्गले भने ।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सीबी पुनका अनुसार फोक्सोको क्यान्सर हुने मुख्य कारण धूवाँ र धूलो हो । चुरोट खाने बानीले फोक्सोको क्यान्सर हुने गरेको छ । सुर्तीमा चार हजार प्रकारका रसायन हुन्छन्, जसमध्ये ४० प्रकारका रसायनले क्यान्सर गराउने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
‘फोक्सोको क्यान्सर हुने ९० प्रतिशत कारण सुर्ती र चुरोट खानु हो’, डा. पुनले भने । क्यान्सर नियन्त्रण र रोकथामका लागि चेतनामूलक अभियान चलाउँदै आएको नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था चितवन शाखाका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेका अनुसार कम उमेरमा सुर्ती र चुरोट खाने बानी नेपालमा बढ्दै गएको छ ।
‘सुर्ती र चुरोट खाएर तत्कालै क्यान्सर भैहाल्ने होइन, बिस्तारै त्यसले आक्रमण गर्दै जान्छ र उमेर पुगेपछि देखिन्छ’, क्यान्सर अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण विभागका प्रमुख प्रधानाङ्गले भने । पुरूष क्यान्सर रोगीमध्ये ५५ वर्षदेखि ७४ वर्ष उमेर हुनेहरु लगभग आधा अर्थात् साढे ४८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
त्यस्तै, महिला क्यान्सर रोगीमध्ये ४० देखि ६४ वर्षका ६० प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएका छन् । ‘क्यान्सरले पीडा धेरै दिन्छ । वृद्ध उमेरमा क्यान्सर हुनु भनेको थप पीडा बेहोर्नु हो’, प्रधानाङ्ग भन्छन् । यस्ता बिरामीलाई निकै राम्रो स्याहारसुसार चाहिन्छ । ‘राम्रो स्याहार दिन परिवारका सबै सदस्य सुसारमा जुट्नुपर्छ, नभए बिरामीले स्याहार पाउँदैन’, प्रधानाङ्गले भने ।
सचेत नहुँदा निम्तिएको समस्या ः
महिलालाई हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर सचेत नहुँदा आएको समस्या हो भन्छन्, चिकित्सकहरु । यो समस्या खास गरेर कम विकसित देशहरुमा बढी छ । ‘विकसित देशहरुमा त पाठेघरको मुखको क्यान्सरको समस्या निकै कम छ’, प्रधानाङ्गले भने । सुरूको अवस्थामा पत्ता लगाए यो क्यान्सर निको हुन्छ । तर, नेपालमा निको नहुने अवस्थामा महिलाहरु उपचारका लागि आउँछन् ।
कम उमेरमा विवाह तथा यौनसम्पर्क गर्ने महिलाहरु, सानैमा बच्चा जन्माउने, धेरै बच्चा जन्माउने, गुप्ताङ्गको सरसफाइमा ध्यान नदिने महिलाहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने प्रधानाङ्गले बताए । ह्युमन पापिलोमा भाइरसका कारण पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गर्छ । विकसित देशहरुमा यो भाइरसको नियमित खोप दिने गरिन्छ ।
‘तर, हाम्रो नेपालमा खोप निकै कममात्रले लिएका छन् । उमेर बढ्दै जाँदा क्यान्सरले ग्रस्त हुन्छन् । अनि, उपचारका लागि आउने गर्छन्’, प्रधानाङ्गले भने । फोक्सोको क्यान्सर हुँदा पनि तत्काल अस्पताल नआउने अवस्था छ । ‘धेरैले क्षयरोग लागेको आशंकाले उपचार सुरू गर्छन् । निको नभएपछि बल्ल क्यान्सरको परीक्षण सुरू गर्छन्’, प्रधानाङ्गले भने ।
चाँडै रोग परीक्षण नगर्दाको परिणाम ः
उमेर ढल्केपछि क्यान्सर लागेको देखिनुमा बेलैमा परीक्षण गराउने परिपाटी नहुनु पनि हो । ‘बिहे भएका महिलाहरुले नियमित स्त्रीरोग परीक्षण र हरेक दुई वर्षमा गर्भाशयको श्राव परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ । यसो गरेमा गर्भाशयको मुखको क्यान्सर भए नभएको सुरूमै पत्ता लाग्छ’, प्रधानाङ्गले भने । तर, यसो गर्नेहरु निकै कम छन् ।
त्यसपछि उमेर ढल्केपछि नै रोग लागेको थाहा हुन्छ । रोग पुरानो भएपछि उपचार गरेर निको हुने सम्भावना पनि साह्रै कम भएर जाने उनले बताए । महिलालाई स्तन क्यान्सर पनि धेरै नै हुने गरेको छ । १० वर्षसम्म उपचार गराएका कुल महिला रोगीमध्ये साढे १५ प्रतिशतलाई स्तन क्यान्सर भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
३० वर्षपछि बच्चा जन्माएका, बच्चा नै नजन्माएका, स्तनपान नगराएका महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । यस्तो सम्भावना भएका महिलाहरुले तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकको मद्दतले क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउन सक्छन् । आफैँले छामेर पनि स्तन क्यान्सर भए नभएको सम्भावना पत्ता लागउन सकिन्छ ।
‘तर सुरूमा परीक्षण गर्ने परिपाटी छैन । रोगले गाँजेर ज्यादै दुख्न लागेपछि मात्रै अस्पताल आउँछन् । यसो गर्दा उमेर ढल्किसकेको हुन्छ’, प्रधानाङ्गले
भने । परीक्षणसम्बन्धी प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्, नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको चितवन शाखाका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके ।
‘खानपान व्यवस्थित गर्न र क्यान्सरसम्बन्धी परीक्षणका बारेमा धेरै प्रचारप्रसार गर्न सके क्यान्सर रोग नियन्त्रण गर्न गाह्रो छैन’, चुकेले भने । यसका लागि सरकारले क्यान्सर रोकथामसम्बन्धी नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ, भन्छन् प्रधानाङ्ग । क्यान्सर नियन्त्रणका लागि जिल्लाजिल्लामा सरकारी निकाय हुनुपर्ने उनले बताए ।
क्यान्सरका बारेमा धेरैलाई अन्यौल छ । यो सरूवा रोग हो या होइन भन्नेमा सर्वसाधारण मात्रै होइन, शिक्षित वर्गलाई पनि प्रस्ट थाहा छैन । ‘क्यान्सर सरूवा रोग होइन, तर हामीले गरेका विभिन्न सर्वेक्षणमा ३० प्रतिशत शिक्षक र २० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीले पनि यो सरूवा रोग हो भन्ने ठान्दा रहेछन’, प्रधानाङ्गले भने । यस्तो धारणा भएको समाजमा क्यान्सर जटिल समस्याका रुपमा देखिएको छ ।
उपचारका क्षेत्रमा धेरै प्रगति भए पनि जनचेतना फैलाउने काममा खासै हुन नसकेको क्यान्सरसम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुको अनुभव छ । ‘रक्त क्यान्सर भएकालाई बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्न परेमा र अन्य केही विशिष्ट परीक्षणका लागि मात्रै विदेश जानुपर्छ, नभए धेरै उपचार यहीँ हुन्छ । अस्पतालहरु पनि बढेका छन्, तर जनचेतना त्योअनुरुप फैलिएन’, प्रधानाङ्गले भने ।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका उपकार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतमका अनुसार क्यान्सर भए नभएको खोज्न र परीक्षण गर्न दैलोदैलोमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार नेपालजस्तो देशमा वर्षमा ३० हजारभन्दा धेरै नयाँ क्यान्सर रोगी हुन सक्छन् । तर, देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउने क्यान्सर रोगीहरु पाँच–छ हजार मात्रै छन् ।
‘घरघरमा जानुपर्छ र चाँडो पत्ता लगाउनुपर्छ । उपचार पनि चाँडो नै गर्नुपर्छ । यसो भएमा युवा अवस्थामै क्यान्सरको जोखिमलाई निराकरण गर्न सक्छौँ । हाम्रा योजनाहरु त्यहीअनुरुप बन्न आवश्यक छ’, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका उपकार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतमको सुझाव रहेको छ ।